नाजिरले उत्कृष्ट नायकको अवार्ड पाउँदा आलोचना ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
नाजिरले उत्कृष्ट नायकको अवार्ड पाउँदा आलोचना !
नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई लक्ष्ति गर्दे थुप्रै खाले फिल्मी अवार्डहरु आयोजना हुँदै आएका छन् । तर बिडम्बना ती अवार्डहरु कुनै न कुनै रुपमा आलोचित हुने गरेका छन् । कहिले व्यवस्थापन त कहिले मनपरी अवार्ड बितरण हुँदा अवार्डको गरिमा र विश्वसनियतामाथि नै गम्भिर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।यस्तै आलोचनाबाट घेरिन पुगेको छ एलजी सिने सर्कल अवार्ड ।
बलिउड नायक गोबिन्दालाई बिषेश अतिथी बनाएर आयोजना गरिएको उक्त अवार्ड कार्यक्रममा केही व्यवस्थापकिय कमजोरीहरु थिए त्यसलाई त बिस्तारै हटाउँदै जाला तर जब नाजिर हुसेनले तिमीसंग फिल्मबाट उत्कृष्ट नायकको अवार्ड जिते तब यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
हुन त नाजिर उत्कृष्ट नायकको अवार्ड पाउँनै हुन्न भन्ने पक्कै होईन तर उनले जुन फिल्मबाट अवार्ड पाए उक्त फिल्ममा उनको भुमिका सहनायकको छ । सहनायकले उत्कृष्ट नायकको अवार्ड कसरी ? के यो जायज छ ? जबकी सो फिल्ममा आकास श्रेष्ठ मुख्य भुमिकामा थिए । यसमा भने जुरी पक्कै चुकेको हो । उता तिमी संग फिल्मले नै उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड पायो ।
जबकी यो फिल्मलाई लगानी सुरक्षित गर्न नै हम्मेहम्मे प¥यो । फिल्मलाई न त समिक्षकले रुचाए ,दर्शकले पनि खासै रुचाएको फिल्म होईन । यसमा पनि जुरी चुकेको छ । जसको आलोचना यतिबेला छरप्रस्ट भईरहेका छन् । यस्ता अवार्डहरुमा अब आफना र कार्यक्रममा आएकालाई मा अवार्ड दिने टे«डको अन्त्य कहिले होला ? जुन अवार्ड सिनेमा क्षेत्र र फिल्मीकर्मीका लागि भनेर आयोजना हुन्छन् तीनै अवार्डप्रति आममानिस र सिनेमाकर्मीकै विश्वास र गरिमा हटेको राम्रो हो ?
फिल्ममा छाउन नसकेकी नायिका मरिस्का पोखरेल जो एकै गितको भिडियोले रातारात चम्किइन् !
सृष्टी र अनमोलको जोडी फेरी एक पटक दोहोरिँदै
‘क्याप्टेन’ पोष्टर सार्बजनिक फुटबल खेलाडी बन्दै अनमोल
चलचित्र ‘पासवर्ड’मा सन्नी लिओनीको निकै हट आइटम डान्स